Indlela yokufunda kunye nokwenza ntoni ngeT4A
Ixesha leRhafu alizange lihambehamba epakini, kwaye ukujongana neefom kunye namagama adidekayo anjengeemoto ze-Star Wars ayenzi ngcono. Kodwa xa uyayazi ukuba yeyiphi ifomu nganye, ukufaka irhafu kuba yinto engaphantsi kwenkathazo.
Ukuba usebenza eCanada, uya kufumana i-Slip yentlawulo yeT4A. Nantsi ukuphazamiseka okukhawuleza kwinto esetyenziswayo yi-T4A Tax Slip kunye nento yokwenza ngayo.
Yintoni i-T4A yentlawulo yeShafu?
Isalathisi sentela yeCanada T4A, okanye iNkcazo yePensheni, uMhlalaphantsi, i-Annuity, kunye nezinye iNgeniso, ilungiselelwe kwaye ikhutshwe ngumqeshi, umphathiswa, umphathi wezindlu okanye ummeli-mali, umlawuli wempesheni okanye umlawuli wenkampani, ukuba akuxelele kunye I-Arhente yeRevenue Revenue (i-CRA) ingaba zininzi zeentlobo zengeniso abaye bakuhlawula ngethuba lonyaka werhafu kunye nenani lentlawulo yengeniso echithwe.
Imali ehlanganiswe yi-T4A yentlawulo yerhafu iquka:
Pension okanye i-annannation
Izibonelelo zokuthatha umhlalaphantsi
Fumana iintlawulo zengeniso eziqokelelwayo
HOLA iintlawulo zoncedo lwezemfundo
Intlawulo phantsi kwecebo lokutshintshwa kwemali-mali
Eminye ingeniso, kuquka neenzuzo zokufa, iintlawulo zokukhubazeka zokukhubazeka, izibonelelo zophando, iibhasari, iibhasari, ubudlelwane, izibonelelo zeeprojekthi zabaculi kunye namabhaso
Qaphela ukuba umvuzo wempesheni kwi-Old Age Security uchazwe kwi- slip ye - T4A (OAS) yerhafu kunye neemali ozifumene kwiCanferensi Pension Plan (CPP) okanye iPrince Pension Plan (QPP) zichazwe kwi- slip ye - T4A (P) yerhafu .
Umgca wokugqibela weT4A Slips Tax
I-T4A isalathisi yentela kufuneka ikhishwe ngomhla wokugqibela kaFebruwari ngonyaka emva konyaka wekhalenda apho i-T4A irhafu isetyenziswa khona.
Isampuli T4A Isaphulelo sentela
Esi sampuli seT4A isaliti kwisayithi ye-CRA sibonisa ukuba isalathisi serhafu ye-T4A sibonakala njani. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga noko kubandakanywa kwibhokisi nganye kwi-slip ye-T4A yentela kunye nendlela yokujongana nayo xa ufaka irhafu yengeniso yakho, qhosha kwikhoksi kwinombolo kwimenyu yokudonsa okanye nqakraza kwibhokisi kwisampuli yeT4A .
Ukufakela i-T4A yentlawulo yeeRhafu kunye ne-Income Tax Tax Return
Xa ufaka iphepha lokubuyisela irhafu yengeniso, faka ikopi nganye yerhafu yeT4A oyifumanayo. Ukuba ufaka irhafu yengeniso yakho yentlawulo usebenzisa i- NETFILE okanye i- EFILE , gcina iikopi zakho zerhafu ngeerhafu zakho kwiirekhodi zeminyaka emithandathu xa kwenzeka i-CRA ukuba ibabone.
I-T4A yeeNkcazo zerhafu ezingekho
Ukuba awufumananga isalathisi serhafu ye-T4, faka ireyiti yakho yerhafu yengeniso ngokukhawuleza ukuba ubalekele izigwebo zokufaka irhafu yengeniso yakho emva kwexesha . Bala imali engenayo kunye naliphi na ukuncitshiswa okunxulumeneyo kunye nezikweletu onokuzibhenela ngokukhawuleza njengoko ungasebenzisa nayiphi na ingcaciso onayo. Faka inqaku kunye negama lomthengisi kunye nedilesi, uhlobo lwenkokhelo, kunye nento oyenzile ukuze ufumane ikopi yeSlip. Uyacelwa ukuba ucele ikopi yeSlip yeT4A ekhoyo. Faka iikopi zaliphi na iingxelo kunye nolwazi owalisebenzisileyo ekubaleni ingeniso kunye nokuncitshiswa kwe-slip yeT4A ekhoyo.
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yeSanta Cruz
Iincwadi ezi-5 eziphezulu malunga nokulwa nobudlelwane
Umntu kunye noHlolo lokuhlalutya "uMntu kunye noSuperman"
I-Horses Top Country Love Songs
Isigaba sokulwa: Ukwenza iMfazwe ibone kakuhle
NdingumPagane, Ngaba Ndingaba nomthi weeholide?